पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको लागि सहारा यूकेको १ लाख ५० हजार रुपैया सहयोग ! - VOICE OF NEPAL TV
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको लागि सहारा यूकेको १ लाख ५० हजार रुपैया सहयोग !
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १६:२२
सहारा यूकेले नेपालको पोखरामा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन २०२१ को लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । भूतपूर्व खेलाडी मञ्‍च नेपालको १५ औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन २०२१ का लागि सहारा यूकेले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
सहारा यूकेका महासचिव धनु थकालीले उक्त रकम बराबरको चेक मञ्चका अघ्यक्ष तेजबहादुर गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । भूतपूर्व खेलाडी मञ्‍च नेपालको १५ औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन २०२१ र वगर भाईखलकको पोखरा १०औं संस्करणको वगर भाई खलक एट ‘ए’ साइड फुटबल २०२१ को सहयोगका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरिएको सहारा यूकेका उपाध्यक्ष ले.री.कुसाङ गुरुङ र कोषाध्यक्ष शारदा गुरुङले जानकारी दिए ।
बगर भाईखलकको १०औं संस्करणको वगर भाई खलक एट ‘ए’ साइड फुटबल २०२१ को सेकेण्ड पुरस्कार प्रायोजन गर्ने यसअघिको निर्णयअनुसार ५५ हजार ५५५ रूपैयाँ रकम चाँड नै बगर भाईखलक पोखरालाई प्रदान गरिने ले.री. कुसाङ गुरुङ उपाध्यक्ष र शारदा गुरुङ कोषाध्यक्षले जानकारी दिए ।
उनीहरुले आगामी दिनहरुमा पनि साथ सहयोग, सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै सहयोगका लागि फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गरेका छन् ।
विग ब्यास लिग क्रिकेटमा सहभागी हुन सन्दीप लामिछाने अष्ट्रेलियातर्फ उडे !
नेपाल कतारविरूद्धको टी-२० सिरिजमा एक खेल अगावै विजयी !
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग : एन्फाद्वारा खेल तालिका सार्वजनिक
नेपाली मुलकी सुमन बेलायतमा काउन्सिलर पदकी उम्मेदवार !
च्याम्पियन्स लिगमा लिभरपुलको विजयी यात्रा कायमै
साफ उपविजेता फुटबल खेलाडीलाई जनही ५ लाख !